Farmaajo oo joojiyey arrin sharci darro ah oo ay maamul goboleedyada sameyn jireyn isagoo la wareegi rabo… - Caasimada Online
Home Warar Farmaajo oo joojiyey arrin sharci darro ah oo ay maamul goboleedyada sameyn...
Farmaajo oo joojiyey arrin sharci darro ah oo ay maamul goboleedyada sameyn jireyn isagoo la wareegi rabo…
Muqdisho (Caasimada Online) – Intii ay jirtay dowladdii Xasan Shiikh Maxamuud ee dhawaan waqtigeeda dhamaaday waxaa la kala aqoon waayey awoodda dowladda dhexe iyo tan maamul Goboleedyada taasoo keentay inaysan dowladda qaban shaqooyinkii looga baahna.
Haddaba dowladda uu hoggaanka u hayo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa daadaal iyo xusul duub ugu jirto sidii ay gacanta ugu dhigi laheyd mashariicda horumarka dalka oo mararka qaar ay iska maamulan jireyn maamulada Goboleedyada.
Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa la filayaa inuu dhawaan qaado Talaalada ugu weyneyd ee lagu yareenayo awoodda maamulka Goboleedyada dalka, sidoo kalana wuxuu dowladaha deeq bixiyayaasha ah ku amri doonaa inay shaqo kata soo hor dhigaa dowladda Soomaaliya ka hor inta aan laga fullin maamul Goboleedyada.
Santuuda ugu weyn mashaariicda ay qaramada Midoobay ku bixiso Soomaaliya ee loo yaqaan JPLG ayaa la filayaa inay dowladda gacanta ku dhigto oo ay qaramada midoobay iska maamulan jireyn.
Dowladad cusub ayaa dhawaan Qaramada midoobay u gudbisay codsi qeexayo in gacanta loo geliyo maamulka mashaariicda Soomaaliya loogu talagalay oo ay iska maamulan jireyn hey’adaha Qaramada Midoobay.
Maamulada ay sida weyn arrintaan u saameyn doonto waxaa kamid ah Somaliland iyo Puntland waxaana dhawaana magaalada Muqdishi kasoo dagay wafdi ka socday wasaaradda arrimaha gudaha Puntland iyo Guddoomiyayaasha degmooyinka oo wadatashi kala sameyn doono dowladda dhexe tallabada ay dhawaan ka qaadan doonto mashaariicda dalka laga fuliyo.
Inkastoo arrintaan ay soo baxday haddana Maxamed Cali Nuur oo ah Agaasimaha mashaariicda ee wasaaradda Arrimaha Gudaha Puntland ayaa xog hoose oo laga sheegeysaa inuu ku sheegay sababta ay Muqdisho u tageyn sidii ay dowladda Soomaaliya uga heli lahaayeen caawimaad, wuxuuna meesha ka saaray inay u joogaan arrimo la xiriira tallabada ay dowladda ka qaadan rabto mashaariicda JPLG